घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'कन्डर किन्डर'। हाम्रो Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै साना ज्ञात तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो खेल बनाउने क्षमताहरूको बारेमा जान्छ तर केवल केहि प्रशंसकहरु Ousmane Dembele जीवनी कथा मा विचार गर्दछ जसले आफ्नो आमाबाबु, भाइ, बहिनी, र जीवन शैली आदि बारे थप सिक्न समावेश गर्दछ। पिच बाहिर उनको जीवन एकदम रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
Ousmane Dembele मा 15th मई मा जन्मे, Vernon मा Vernon, उत्तरी फ्रान्स मा Ousmane स्नर (पिता) र Fatimata Dembele (आमा) द्वारा 1997।
दुवै आमाबाबु मॉरिटानिया (पश्चिम अफ्रिका) बाट आएका प्रवासीहरू थिए जसले राम्रो जीवन बिताउन फ्रान्समा गएर उनीहरूलाई सचेत पारे।
बच्चाको रूपमा, Ousmane एक एक्स्ट्रोव थियो जो फुटबलको बारेमा अभिनय भयो र अध्ययन गर्नुको सट्टा मात्र सोच्न थाल्छ। वास्तवमा, उनी आफ्नो परिवारको एकमात्र सदस्य थिए जसले शिक्षालाई इन्कार गरे। तिनको आमाबाबु र सम्भावनालाई ध्यान दिएर, आमाबाबुले Ousmane लाई आफ्ना सपनाहरू पालन गर्न अनुमति दिए।
जस्तै उनको ओमानमान डेबिलेलको भाइ र बहिनीले उनीहरूको शिक्षा उन्नति गर्थे, उनी आफैले महसुस गरे कि उनी आफ्नो क्यारियरमा व्यापक धक्का चाहिन्छ।6उमेरमा तिनले आफ्नो माम, सबै जन्मको ठाउँबाट वर्नोन (उत्तरी फ्रान्सेली) यात्रा गर्न रेन्नेस (उत्तर पूर्व फ्रान्समा) आफ्नो चाचालाई भेट्न एक ठूलो निर्णय गरे Sambagué जो फुटबलर हुन र तिनको लागि एक मोडेल हुन्छ। त्यहाँ, उनले तिनबाट पाठ प्राप्त गरे र 2004 मा मेडिलीन एवरेक्स फुटबल क्लबमा आफ्नो युवा क्यारियरको औपचारिक सुरुवात गरे।
उनको माम (फतिमिता डेबिल) को निर्देशित उनलाई उनको प्रतिष्ठित क्यारियर मा प्रभावशाली थियो।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
मुर मिडियाले आफ्नो बुबाको बारेमा चिन्ता मिडियाको बारेमा थाहा छैन। जब उनको छोरो बोरुसिया डर्टमन्ड को लागि हस्ताक्षर गरे तब उनले केवल आफैले दिखाए। (तल फोटो)।
डेबिलको आमाबाबु - ओमानमान स्नर (बुबा) र फतिमिता डेबिलि (आमा)।
जस्तै पल पोगाबा, Ousmane Dembele को जीवन आफ्नो आमा, Fatimata Dembele, जो आफ्नो छोराको क्यारियर मा सबै भन्दा ठूलो प्रभाव मानिन्छ को नजिकै केन्द्रित छ।
उनीहरूलाई इनाम लिने बारे गम्भीर थिए रेनेस सबै आफ्नो आमा Fatimata मार्फत गए।
अनुसार संरक्षक, "Fatimata एक हो जसले Ousmane भविष्यको निर्णय गर्नेछ, उनको निन्दा र अनुबंध सम्झौता गर्दछ।"
उनले डेबिलको एजेन्ट, बेउडो संगमा को सहयोग गरेको छ जसले फुटबल प्रतिभाको परिवारको सदस्य हो। जसले उहाँलाई कैरियर छलांग दिन्छ। तल फोटो Ousmane Dembél संग उनको आमा र एजेन्ट Fatimata र सहायक संग देखाउँछ।
डेबेलको माई र सहयोग
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:जीवन भन्दा पहिले जीवन
त्यो प्रसिद्ध छ पहिले, ओमानमान डेबिलले 2010 मा रेन्स II मा भाग लिन अघि मेडलाइन इरेरेक्स र इवरेक्स युवा युवा टोलीहरूको लागि खेले। उहाँ मात्र 13 वर्ष पुरानो हुनुहुन्थ्यो।5/ 2015 सिजनमा उनीहरूको शीर्ष विभाजनमा जान अघि उनले 2016 वर्षको लागि क्लबको लागि खेलिन्। त्यहाँ त्यहाँ, उहाँले लीग 1 सबैभन्दा लोकप्रिय सम्पत्ति बन्नुभयो। उनी सबै भन्दा सानो खेलाडी थिए जुन लाइक मन पराएकी लीगमा 10 लक्ष्य चिन्ह पुग्यो थियरिरी हेनरी र एंथोनी मार्शल.
12 मई 2016 मा डेमिबलले जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डसँग पाँच-वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यहाँ, त्यो केवल क्लबमा सर्वश्रेष्ठ भएन। उहाँ फुटबलको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति बन्नुभयो।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: Dortmond संग मुद्दा
बोउसिया डर्टमुन्डले एक पटक आफ्नो सुपरस्टार Ousmane Dembél को आवश्यकता को बिरुद्ध को लागि एफई बार्सिलोना को UEFA मा रिपोर्ट गर्यो। Ousmane Dembéle यो सुन्नु भएको यो पछि प्रशिक्षित गर्न इन्कार गर्यो। उनी एभल गए अनि आफूलाई आफैले उपलब्ध गराए। यो के थियो उनीहरु को सपनाहरु को एक मजबूर चाल को रूप मा।
बार्सिलोना उनको लागि धेरै पैसा कमाई। अन्त्यमा सबैजना खुसी थिए।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बार्सिलोना ड्रीम
त्यो वर्ष 2017 मा उहाँ सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्व फुटबलर बन्नुभयो। यसले ठूलो नामहरूलाई शारजस्तै पीछा गर्यो। 25 अगस्ट 2017, ला लिगा साइड एफसी बार्सिलोनाले घोषणा गरेको छ कि उनी डेम्लेले € 105 मिलियन प्लस एड-अनको लागि साइन-अप गर्ने सम्झौतामा पुग्यो, 28 अगस्त मा एक मेडिकल को अधीन
उहाँले पाँच वर्षको अनुबंधमा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ र उनको खरीदआउट खण्ड € 400 मिलियनमा सेट गरिएको छ। यो सम्झौताले उनलाई संयुक्त सेकेन्ड सबैभन्दा महंगी खेलाडी (यूरोमा) बन्न पुग्यो, पहिले बार्सिलोना खेलाडीको मात्र दोस्रो नेमार.
रेन्नेसले बिक्रीको परिणामको रूपमा बोनसिया डर्टमुन्डबाट € 20 मिलियन रिपोर्ट गरे। यो सुपर स्टार को आधार बिछाने को लागि रेन्स को लागि एक धन हो। एक काम राम्रो भयो।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको आइडल
दुबै सेडू केईटा र फ्रेय्रेक कनेथे स्थानीय मूर्तिहरू Ousmane Dembele मा।
एक अधिक पेशेवर दृश्य देखि, उनले Radamel Falcao र छ लिओनेल मेस्सी। बार्सिलोना छनौट गर्ने उनको निर्णय दुवैको साथ खेल्नको दृष्टिकोणमा आएको थियो लिओनेल मेस्सी र क्लबलाई सम्मान दिईयो सेडू केईटा एक क्यारियर सपना
Radusel Falcao को लागि Ousmane Dembele प्यार
Ousmane Dembélé एक पटक समुद्री तट मा गुणवत्ता समय छ, जबकि आफ्नो छाती मा आफ्नो नाम लेखेर राडामेल फाल्काओ को लागी आफ्नो सम्मान देखाएको छ।
यसले उहाँप्रतिको आदर देखाउँछ।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:जीवन शैली
बोरुसिया डर्टमन्डसँग उनको समयको सबैभन्दा राम्रो साथी हो पियरे-एमिरिक एबम्हाङ।
दुबै दुबै कारले समान कार चलाउँछ। Ousmane Dembele घर र कि Auba एउटै ढाँचा पनि हो। उनको ठूलो पैसा सारिसकेपछि, उहाँले आफ्नो कपाल आफ्नो किश विकसित गर्न योजना थियो सबैभन्दा राम्रो मित्र।
Ousmane Dembele जीवन शैली
उनको ठूलो जीवन स्पेनी विशालमा जाने पछि उनको जीवन शैली परिवर्तन भएको छ। एफसी बार्सिलोनामा, उनको सबैभन्दा राम्रो मित्र शमूएल उमटिटी (स्पेस क्लब एफसी बार्सिलोनाका लागि केन्द्र-ब्याक) हुन्छ।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:फीफा रेटिंग
फीफा 17 मूल्याङ्कन आफ्नो फेममा प्रसिद्धिको अवधि अघिको अवधिको लागि देखाउँछ।
Ousmane Dembele फीफा 18 भविष्यवाणी
Ousmane Dembele को लागि फीफा 18 दर्जा को लागी 89 को लागी आशा छ।
जीन-फिलिप मटेटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Dayot Upamecano बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
इब्राहिमा कोनेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Lys मूससेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
नील माउपाई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Moussa Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
थियरी हेनरी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Djibril Cisse बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
लुकास डिग्ने बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
किंग्सली कमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल